चीन इलेक्ट्रिक स्कुटर केटी निर्माता र आपूर्तिकर्ता | हाइबा
11 इन्च इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू
इलेक्ट्रिक स्कूटर केटी
यदि तपाईं उच्च गुणस्तरमा सम्झौता नगरी बजारमा एकदमै सस्तो इलेक्ट्रिक बाइक खोज्दै हुनुहुन्छ भने, Ancheer 26 बाहेक अरू नहेर्नुहोस्”। यो ebike बजार मा धेरै भन्दा धेरै पहुँचयोग्य मूल्य स्तर मा उपलब्ध छ। यो इलेक्ट्रिक स्कूटरको तीखा किनारहरू, चपल टायरहरू र अत्यधिक वर्तमान कार्बनले यसलाई बजारमा निस्सन्देह बनाउँदछ यदि तपाईं प्रभाव पार्नको लागि इलेक्ट्रिक स्कूटरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने। केही धातुहरूले लचिलोपन र कार्गो क्षमताको सही स्थिरता प्रदान गर्न सक्छ, तथापि, तिनीहरूको वजनको कारणले, सम्भवतः स्कूटरमा धेरै थोक थप्नेछ। इलेक्ट्रिक बाइक कति छन्? त्यहाँ 2016 मा पनि अध्ययनहरू छन् जसले यस प्रकारको बाइकको बिक्री अत्यधिक बढेको दस्तावेज गर्दछ।
निःशुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटर कोचिङ सेवाहरू
यदि तपाईं उच्च गुणस्तरमा सम्झौता नगरी बजारमा एकदमै सस्तो इलेक्ट्रिक बाइक खोज्दै हुनुहुन्छ भने, Ancheer 26 बाहेक अरू नहेर्नुहोस्”। यो ebike बजार मा धेरै भन्दा धेरै पहुँचयोग्य मूल्य स्तर मा उपलब्ध छ। यो इलेक्ट्रिक स्कूटरको तीखा किनारहरू, चपल टायरहरू र अत्यधिक वर्तमान कार्बनले यसलाई बजारमा निस्सन्देह बनाउँदछ यदि तपाईं प्रभाव पार्नको लागि इलेक्ट्रिक स्कूटरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने। केही धातुहरूले लचिलोपन र कार्गो क्षमताको सही स्थिरता प्रदान गर्न सक्छ, तथापि, तिनीहरूको वजनको कारणले, सम्भवतः स्कूटरमा धेरै थोक थप्नेछ। इलेक्ट्रिक बाइक कति छन्? त्यहाँ 2016 मा पनि अध्ययनहरू छन् जसले यस प्रकारको बाइकको बिक्री अत्यधिक बढेको दस्तावेज गर्दछ। यसलाई हेर्नुहोस् यद्यपि तपाईले पहिले तपाईको बाइकसँग उपयुक्त प्याकेजको प्रकारको विश्लेषण गर्नुहोस् वा तपाईले प्रयोग गर्न नसक्ने उत्पादनमा तपाईको उच्च डलर बर्बाद गर्नुहुनेछ। हाम्रो गहिरो Ride1Up ई-बाइक मूल्याङ्कन जाँच गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई तिनीहरूका पूर्णतया फरक मोडेलहरू मूल्याङ्कन गर्न र नयाँ लागतहरू हेर्न मद्दत गर्नेछ। त्यसोभए फेरि, यदि तपाइँ उच्च गुणस्तरको लागतको दायरा $ 1500 बाट र $ 5000 सम्म जान सक्छ। यो नै मुख्य उद्देश्य हो कि जेटलाई समसामयिक लाइनअपबाट हटाइयो, यद्यपि हामी बेवास्ता नगरौं कि दुई-स्ट्रोकहरू सामान्यतया अतिरिक्त शक्तिशाली मोटरसाइकलहरू हुन्, जसले जेटलाई तौल अनुपातमा उच्च ऊर्जा प्रदान गर्दछ - जुन महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं कार्यसम्पादन सचेत हुनुहुन्छ भने... यो हो। 180 किलोग्राम टर्टल किंग भन्दा थोरै हल्का यसको 150 किलोग्रामको सुख्खा वजन दिए। मूल्य ट्याग डरलाग्दो हुन सक्छ कि कसरी तेज युवाहरू विकास हुन्छन्।
आफ्ना युवाहरूलाई हाई स्कूलमा पठाउँदै हुनुहुन्छ? बालबालिका र किशोरकिशोरीका लागि शीर्ष १० बजेट इलेक्ट्रिक राइडिङ स्कूटरहरू! यसले यसलाई भारतमा सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो मूल्य दायरा इलेक्ट्रिक स्कुटर बनाउँछ। विद्युतीय स्कुटरलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै ओराले भारतका चार सय सहरमा करिब १० हजार रुपैयाँको चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । उस्तै समयमा, यसले 6061 एल्युमिनियम मिश्र धातु र4देखि छ घण्टाको चार्ज अवधिको गर्व गर्दछ। चार्जिङ मेकानिजम ट्रंकको मुनि प्रटेन्ड इन्जिनको आवाजको साथ हुन सक्छ ताकि पैदल यात्रुहरूले यसको उपस्थितिको बारेमा थाहा पाउन सकून्। म्यांगनीजको उपस्थितिले ब्याट्रीको आन्तरिक प्रतिरोधलाई कम गर्छ, कम तापक्रमलाई कायम राख्दा उच्च वर्तमान उत्पादनलाई अनुमति दिन्छ। वार्षिक बिक्री आउटपुट 350,000 - 500,000 मोडेलहरू भन्दा बढी छ। तर वाट घण्टा (Wh) सम्भवतः प्रयोग गर्नको लागि एक अतिरिक्त आवश्यक निर्धारण हो - यसले ब्याट्री आउटपुटलाई विचारमा लिन्छ। यसलाई आफैले कसरी बनाउने भनेर पत्ता लगाउन आवश्यक छैन। विपरीत सबैभन्दा छिटो गतिशीलता स्कूटरहरूको बारेमा थप पढ्नको लागि, यो लेखमा हेर्नुहोस्! उत्तम पोर्टेबल गतिशीलता स्कूटरहरूमा थप मूल्याङ्कनहरू जान्नको लागि, हाइपरलिङ्कमा पूर्ण लेख प्रयास गर्नुहोस्! यदि तपाइँ हाम्रो उत्तम फोल्डिंग मोबिलिटी स्कूटरहरूको सबै छनौटहरू हेर्न ख्याल गर्नुहुन्छ भने, आज बजारमा उपलब्ध उच्चतम फोल्डिंग मोबिलिटी स्कूटरहरूको हाम्रो लेख हेर्नुहोस्। भिन्नता बीचको मूल्यमा, 700 सिरिज शक्तिशाली अलराउन्डर इलेक्ट्रिक बाइकको खोजीमा बजारमा सबैभन्दा राम्रो निर्णय हो। Ride1Up 700 Series ले क्लिन अटोमेटिक सिफ्टिङ, हाइड्रोलिक इन्ट्रेन्स र रियर डिस्क ब्रेक र ८ स्पीड शिमानो प्रोफेशनल ट्रान्समिसन सिस्टम प्रदान गर्दछ।
चाहे उनीहरूले व्यावसायिक कार्यका लागि बाइक किन्दै छन् वा रमाइलोका लागि, उनीहरूलाई उत्कृष्ट यात्रा प्रदान गर्ने हाम्रो लक्ष्य उस्तै रहन्छ। यसलाई सफा गर्नुहोस्, कुशल मर्मतसम्भारको आवश्यकता पर्दैन, र तपाईंको पैसा बचत गर्नुहोस्। विद्युतीय पुतलाले तपाईंलाई ऊर्जा बचत गर्न मद्दत गर्दछ जबकि सहायक मोडले तपाईंलाई लामो यात्राहरूमा टिक्न अनुमति दिन्छ। फेरि, यदि तपाईं कार मालिक हुनुहुन्छ भने, गर्वका साथ ई-बाइकको स्वामित्वले तपाईंलाई इन्धन र बारम्बार टायरहरू फाल्ने र फाट्ने बचत गर्न अनुमति दिन्छ। LMT'D लाई भर्चुअल रूपमा अटोमोबाइल विकल्पको रूपमा डिजाइन गरिएको थियो, जसले पेडल मद्दतको उच्च दायराहरू प्रयोग गरेर एकल लागतमा 50 माइलसम्म शुद्ध विद्युतीय यात्रा प्रदान गर्दछ। अर्को, सुविधा-सहायता मोड हो जहाँ यसले तपाईंको अनुभवलाई सहयोग गर्न एकदमै नयाँ अत्यधिक-अन्त सहायता प्रणाली प्रयोग गर्दछ। यो भनाइ बिना जान्छ कि एक ई-बाइक द्रुत रूपमा यातायातको राम्रो मनपर्ने मोडमा परिवर्तन हुँदैछ। तपाईलाई अज्ञात मोडेलको उत्कृष्ट-कम लागतको स्कूटरले प्रलोभनमा पार्ने सम्भावना छ, यद्यपि यो प्रभावकारी रूपमा गलत आर्थिक प्रणाली हुन सक्छ; सस्तोमा बनाइएका ई-स्कुटरहरू खराब उच्च गुणस्तरका कम्पोनेन्टहरूबाट बनाइने सम्भावना छ, र केही गल्ती भएमा बिक्रीपछिको सेवा छैन। यो लाइटवेट फोल्डेबल इलेक्ट्रिक स्कुटरको पावर 270W छ। तपाईले यसलाई प्रति चार्ज 15 माइल जति अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फ्रेमले साइकललाई अत्यधिक प्रभावकारी ऊर्जा दिन्छ, यसले 26 mph सम्मको गति हासिल गर्न अनुमति दिन्छ। इलेक्ट्रिक स्कूटर र इलेक्ट्रिक साइकल बीचको अन्तरलाई सहजै फ्युज गर्दै, रेजर इकोस्मार्ट मेट्रो इलेक्ट्रिक स्कूटरमा लामो दूरीको लागि डिजाइन गरिएको मोटर, आरामदायी यात्राका लागि राम्रो डिजाइन र सबैका लागि विजेता हुने अपील छ। तपाइँ केवल बाइकमा अनुभव गर्नुहुन्छ, पेडलको साथ प्रोपेल र कम्प्याक्ट मोटरले तपाइँको यात्रालाई बढावा दिन्छ। अर्को बोनस: Lectric XP 2.Zero यति कम्प्याक्ट छ कि यो पूर्व-एसेम्बल हुन्छ। Lectric XP 2.Zero folding ebike ले तपाईले चाहनुहुने सबै टुक्राहरू प्रदान गर्दछ इलेक्ट्रिक बाइकबाट थप बोनसको साथ यो केवल पोर्टेबल छ। बजारले हाल प्रवेशद्वार, रियर-व्हील प्याकेज, वा ब्याट्री सहितको रूपान्तरण किट बराबरको इलेक्ट्रिक बाइक रूपान्तरण किटहरूको विस्तृत श्रृंखला दिन्छ। यसले असमान भू-भागमा राम्रो व्यवस्थापन प्रदान गर्दछ जुन लोकप्रियतामा बाइकरहरूलाई उकालो चढ्न र डाउनहिलमा सजिलैसँग झर्ने सेवा प्रदान गर्दछ। Lectric XP 2.0 को साथ, तिनीहरू राम्रो प्रभावको साथ एक उत्कृष्ट फोल्ड गर्न मिल्ने इलेक्ट्रिक साइकल अपग्रेड गर्न आफ्नो विशेषज्ञताको प्रयोग गर्दैछन्। Lectric एक उत्कृष्ट प्रवर्द्धन गर्ने विद्युतीय कम्युटर बाइकहरू अनलाइन बनाउनका लागि पहिचान गरिएको मोडेल हो।
ब्रान्ड नयाँ 2013 HONDA FURY 1300 VT1300CX आउट द डोर मूल्य! तपाइँ सम्भवतः केवल कामहरू चलाउन सक्नुहुन्छ, पार्कमा तपाइँको कुकुर हिड्न सक्नुहुन्छ, वा तपाइँको साझा ट्रेनबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ। केवल यसको दुई प्राप्य मोडहरूबाट चयन गर्नुहोस्: पैदल मद्दत र पेडल मद्दत र तपाईं निश्चित रूपमा आफ्नो तरिकामा हुनुहुन्छ। यो बाइक प्रयोग गर्दा, तपाईंसँग कुनै पेडल मद्दत बिना वा प्रतिबन्धित पेडल इलेक्ट्रिक मद्दतको साथ तपाईंको प्रयासहरूलाई सुदृढ पार्न यो यात्रा गर्ने विकल्प छ। यसलाई अति-ऊर्जा मोडमा 28 माइल प्रतिघण्टाको उच्च गतिमा न्यूनतम प्रयासमा हिर्काउनुहोस् वा पेडल बिना नै साइकल चलाउनुहोस्, बासट्ठी पाउण्ड बडी (जुन मानार्थ र्याक र फन्डरहरूसँगै आउँछ) भए पनि। तपाईले तीनवटा पूर्णतया फरक पावर विकल्पहरूको साथ सहायता मोड रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईको हरेक दिनको कम्युट, पहाडमा क्रूज, वा तपाईको मनपर्ने ट्रेलको छेउमा हिँड्ने पर्याप्त ऊर्जा भन्दा ठूलो छ। यस बीचमा, यदि तपाइँ इलेक्ट्रिक बाइकको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाइँ तपाइँको दैनिक यातायात र कहिलेकाहीं पथ बाइकिङमा भर पर्न सक्नुहुन्छ भने यो ई माउन्टेन बाइक तपाइँले खोज्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाइँ यसलाई पेडल-मद्दत संग काम गर्न वा तपाइँको कसरतको लागि केहि ट्रेल बाइकिङ गर्न छनौट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। 360-डिप्लोमा प्रकाश प्रणाली प्रदर्शन गर्दै जुन तपाईंलाई फराकिलो प्रकाश प्रदान गर्न सक्छ, यो उपयोगी विशेषता उत्तम हुन्छ जब तपाईं काममा ढिलो काम गर्दै हुनुहुन्छ वा साँझको साइकल चलाउन मन पराउनेहरूका लागि। के तपाइँ सामान्यतया साँझमा अनुभव गर्नुहुन्छ? यस बाइकको ज्यामिति भनेको ४ फिट १० इन्च र ६ फिट ७ इन्च बीचको जो कोहीले पनि आरामसँग अनुभव गर्न सक्छन्। तपाईंले सम्भवतः यो बाइक आफ्नो नियमित यात्रा, छोटो यात्रा, र जाडो महिनाहरूमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको लागि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। Pls ब्याट्री उत्पादन मिति परीक्षण गर्नुहोस्, यो ब्याट्री उत्पादन भएको मिति देखि तपाईले सामान प्राप्त गरेको मिति सम्म लगभग2महिना वा लामो समय हुनुपर्छ। यदि तपाईंले गर्नुभएन भने, खरीद मितिबाट प्रोमो स्थिरतामा जिज्ञासालाई चार्ज गरिनेछ।
अघिल्लो: इलेक्ट्रिक स्कूटर राम्रो
अर्को: इलेक्ट्रिक स्कूटर हिउँको लागि राम्रो
वयस्कहरूको लागि इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक ड्राफ्ट स्कूटर
भारी वयस्कहरूका लागि फोल्डेबल इलेक्ट्रिक स्कुटर...
बिजुली स्कुटर बिक्री को लागी सस्तो शीर्ष इलेक्ट्रिक Sc...
इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू दुई वयस्कहरूको लागि इलेक्ट्रिक स्कूटर